गाँजा खेतीलाई कानुनी मान्यता दिने बाटो खुल्यो ! – Koshidaily
मुख्य पृष्ठसमाचारगाँजा खेतीलाई कानुनी मान्यता दिने बाटो खुल्यो !
काठमाडौं : नेपालमा गाँजा खेतीका लागि कानुनी बाटो खुलेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको कमिसन अन नार्कोटिक ड्रगमा सचिवालयमा सदस्यका रुपमा नेपालले पनि गाँजा खेती खुलाउने पक्षमा मतदान गरेको हो। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद शेरबहादुर तामाङका अनुसार नेपाल सरकारको निर्णयानुसार जेनेभामा रहेका राजदूत प्रकाशकुमार सुवेदीले गाँजा खेती खुलाउने पक्षमा मतदान गरेका हुन्। तामाङले गाँजा खेती खुलाउनुका लागि संसदमा विधेयक अघि बढाउन केही वर्षदेखि पहल गर्दै आएका छन्।